बाबु भनेर इज्जत दिएँ तर उहाँले मेराे मन दुखाउनुभयो – सपना – Online Nepalaja
बाबु भनेर इज्जत दिएँ तर उहाँले मेराे मन दुखाउनुभयो – सपना
February 17, 2021 79
बिबिसीको प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी १८ वर्षीया सपना रोका मगरलाई धम्क्याउने विनयजंग बस्नेत मंगलबार साँझ पक्राउ परे।महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको टोलीले उनलाई गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट पक्राउ गरेको हो।विनयजंग बस्नेतले उनलाई धम्क्याएपछि सामाजिक सञ्जालबाट टाढिएकी सपनाले बस्नेत पक्राउ पर्ने वित्तिकै फेसबुकमा स्टाटस लेखिन्।’धेरैको जिज्ञासा थियो म किन बोलिरहेकी छैन भनेर। कानुनभन्दा माथि हामी कोही थिएनौं। सम्पूर्ण प्रहरी प्रशासनको अथक प्रयासपछि फेरि फरार हुने क्रममा काठमाडौंको नयाँ बसपार्कबाट विनयजंग बस्नेतलाई पक्राउ गरेको छ। अब सत्यतथ्य कानुनी प्रक्रिया अनुसार बाहिर आउँछ,’ उनले लेखेकी छन्।
उनले अराजकहरू क्षणिकका लागि मात्रै विजय हुने बताएकी छन्।’सबैजना अवगत नै छन् अराजकहरू क्षणिकका लागि विजय हुन्छन् र सत्य ढिला भए पनि सही रुपमा बाहिर पक्कै आउँछ,’ उनले लेखेकी छन्।त्यस्तै सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले आफूले बुबा मानेका व्यक्तिबाटै चरित्र हत्या गरिँदा मन दुखेको बताइन्।’धेरैले धेरै पटक मेरो चरित्र हत्या गर्ने कोसिस गर्नुभयो। कतिपय सफल पनि भए। एकचोटि मरेर बाँचिसकेकी मान्छेलाई फेरि किन मार्न खोज्छन् होला भनेर मन त दुख्छ नै। तर पनि हामी कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै गयौं,’ उनले भनिन्,’ बाबु भनेर धेरै नै इज्जत दिइयो तर उहाँले नै यस्तो कुरा गर्दा एकदमै मन दुख्यो।’
सपनाले अहिले आफ्नै नामको संस्था पनि दर्ता गराइसकेकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट उनले सपनाको चाहना: समृद्ध नेपाल संस्था दर्ता गरेकी छन्।बेवारिसे शव तथा बेसाहाराका लागि यो संस्था दर्ता गरी आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन लागेको उनले बताइन्। यो संस्था माघ १९ गते नै दर्ता भएको थियो। त्यसकै भोलिपल्ट उनले नेपालगन्जमा एक बेवारिसेको शव जलाएकी थिइन्।सपनाले विनयजंग बस्नेतलाई आफ्ना बुबा मान्ने गरेकी थिइन्। उनीहरू दुबै जना मिलेर बेवारिसे शव जलाउने गर्थे।
म्याग्दीबाट काठमाडौं आएकी सपना बस्नेतसँगै बस्थिन्। त्यही क्रममा उनीहरूबीच तिक्तता आएको थियो। गत कात्तिकमा बस्नेतलाई छाडेर सपना घर फर्किएकी थिइन्।उनीहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रिएपछिबस्नेतले युट्युबमार्फत अभिव्यक्ति दिई सपनालाई धम्क्याएका थिए।विनयले युट्युब च्यानलमा आफूसँग सपनाका नग्न तस्बिरहरू पेनड्राइभमा भएको बताएका थिए। उनले ती सामग्री सार्वजनिक गर्ने धम्की दिएका थिए।त्यसपछि सपनाले दिएको जाहेरी आइतबार काठमाडौं परिसरमा दर्ता भएको थियो। विनयजंग बस्नेतमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्धा दर्ता भएको हो।उनीमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
को हुन् सपना?
सपना रोका मगर म्याग्दीको मंगला गाउँस्थित घरबाट चार वर्षअघि झोला बोकेर निस्केकी थिइन्।एघार कक्षा पढ्न बेनी बजार हिँड्दा उनको मन रोमाञ्चले भरिएको थियो, जसरी उनको झोला आमाले राखिदिएका चामल, घ्यू र लत्ताकपडाले भरी थियो।उनै सपनालाई हामीले केहीअघि पशुपति आर्यघाटमा फरक अन्दाजमा भेटेका थियौं।हामी पुग्दा उनी हातमा पञ्जा लगाइरहेकी थिइन्। छेउकै स्ट्रेचरमा एक युवतीको शव थियो। कामदारहरूले चितामा काठ राखुञ्जेल उनी छेउमा बसिन्। शव जलाउन तयार भएपछि सपना घाटबाट बागमती झरिन्। त्यसपछि दाहसंस्कारको विधि सुरू गरिन्। दागबत्ती दिइन्।
त्यो शव उनका कुनै आफन्तको थिएन। बेवारिसे थियो। उनले अहिलेसम्म यस्ता ४० भन्दा बढी बेवारिसे शवलाई दागबत्ती दिइसकेकी छन्।घरबाट पढ्न हिँडेकी उनले कहाँ सोचेकी थिइन् र यसरी अपरिचितका शवमा दागबत्ती दिँदादिँदै जिन्दगीको अर्थ भेटाउँला भनेर!२०७३ सालमा गाउँको महेन्द्र रत्न उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट राम्रै ग्रेड ल्याएर एसइई पास गरेकी थिइन् सपनाले। पुल्पुलिएकी कान्छी छोरीलाई चाहिएका सबथोक आमाबाले पुर्‍याइदिन्थे। पढाइ राम्रो थियो, त्यसैले उनी सहर गएर पढ्न चाहन्थिन्।
घरबाट बेनी बजार टाढा थियो। तै पनि आमाबाले उनलाई एक्लै पठाए।गाउँजस्तो थिएन बजार। उनी भने उस्तै फरासिली थिइन्। धेरै साथी बनाइन्। साथीहरूले उनलाई आफ्ना दु:ख देखाउँथे। उनी साथीहरूका दु:ख कम गर्ने कोशिस गर्थिन्।’साथीहरूले केही दु:ख परे मलाई भन्थे। म घरबाट दिएको पैसा पनि उनीहरूलाई दिन्थेँ,’ उनले भनिन्, ‘घरमा ढाँटेर साथीहरूलाई मद्दत गर्थें।’तिनै साथीहरूको लहैलहैमा उनको जिन्दगी कलेज-घरको सिधा बाटो छाडेर अर्कै बाटो हिँड्न थाल्यो।
त्यो समयलाई उनले यसरी सम्झन्छिन्, ‘सहरको रंगीन दुनियाँमा म फसिसकेकी थिएँ। जोशमा होस गुमाएर हराएकी थिएँ। गलत के हो, सही के हो छुट्टयाउन गाह्रो हुने दुनियाँ थियो मेरो।’यसैबीच उनको एक युवकसँग सम्बन्ध गाँसियो। त्यही सम्बन्धको फेरोमा उनका संघर्षका दिन सुरू भए।कक्षा ११ को परीक्षा दिएपछि उनी पढाइ छाडेर तिनै युवकसँग भागेर बुटवल आइन्। आमाबासँग राम्ररी कुरा हुन पाएन। उनले आफ्ना कुरा बुझाउन सकिनन्, उनीहरूले पनि छोरीका कुरा बुझ्न सकेनन्। गाउँलेले नै कथा बुनेर सुनाउन थाले- तिम्री छोरी बिग्री।
बुटवल आएपछि ती युवकसँग उनको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन। त्यही रनाहामा बल्ल उनले पछि फर्केर हेरिन्। कहाँबाट गल्ती हुन सुरू भयो थाहा पाइन्।उनी फर्केर म्याग्दी जान सक्दैनथिन्। पश्चातापले भारीले उनलाई थिचेको थियो। त्यो भारी टाउकाबाट निकालेर हलुङ्गो बनाइदिने आमाबाको अगाडि पर्ने आँट पनि उनमा थिएन। त्यसमाथि समाजले लगाउने लाञ्छना मुटुमा तीरझैं रोपिन्थ्यो। उनी दिनदिनै कमजोर हुँदै थिइन्। समाजबाट बहिष्कृत भएँ भन्ने पीडाले आत्तिएकी पनि थिइन्।
एकदिन ती युवकसँग उनी छुट्टिइन्। जाने ठाउँ नहुनेहरूको बास आखिर सडक नै हो, उनी पनि सडकमा पुगिन्।’ती दिनहरू धेरै कठिन थिए,’ उनले सम्झिइन्, ‘बाटोमा बस्ने बालबालिकाहरूसँगै बस्थेँ। त्यहाँ बसिरहँदा सडकमा हिँडिरहेका कोही मान्छे आएर बोलिदिओस् जस्तो लाग्थ्यो।’उनको बास खुला सडकमा थियो, तर उनलाई आफ्ना लागि सम्पूर्ण बाटा बन्द भएजस्तो लाग्थ्यो।एकदिन उनलाई मरिदिउँजस्तो लाग्यो। त्यो दिन आफ्नो मन बुझाउन उनलाई निकै सकस परेको थियो। अँध्यारो कथाजस्तो जिन्दगीको त्यो पाना पल्टाउन निकै हम्मे पर्‍यो। तर पल्टियो र जुट्यो हिम्मत।
सडकबाट उठेर उनी म्याग्दी फर्किइन्।उनी आमाबाले अस्वीकार गर्छन् कि भनेर डराएकी थिइन्। तर आमाबाको मन न हो। उनले गाली मात्रै खाइन्।घरमा बसेको केही समयमै उनलाई दिदी-दाइझैं विदेश जान मन लाग्यो। त्योभन्दा पहिले त रोकिएको आफ्नो पढाइ सकाउनु थियो। आमाबालाई मनाएर फेरि पोखरा आइन्। त्यहाँको ग्यालेक्सी कलेजबाट १२ कक्षा पास गरिन्।
जापानिज भाषा सिकेर उड्ने उनको विचार थियो। तर जिन्दगीले फेरि बाटो मोड्यो। उनी आमाको सल्लाह मानेर सात महिनाअघि काठमाडौं आइन्। नयाँ सहर, नयाँ सपना!काठमाडौं आएको दुई महिनापछि सलिनाका बाबा विनयजंगसँग उनको भेट भयो। सलिनालाई उनले पोखरामै चिनेकी थिइन्। उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्ध थियो। उनीसँगै सपनाले शव जलाउने काम सिकेकी थिइन्।
Prevभा’गर’थी भ’ट्टको ह’त्यामा सं’लग्न दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक ग’रिदै, यसरी रु’दै स्वी’कारे ह’त्या…
फेरी ह्वत्तै बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको कारोबार ?
कोरोना खोप लगाई सकेपछी भुलेरपनि नगर्नुहोस् यस्ता काम,जाला ज्यान।